के कागती ले क्यान्सर निको पार्न सक्छ? - THIP Media
Home तथ्य जांच - Nepali
Choosealanguage English हिन्दी বাংলা नेपाली
के कागती ले क्यान्सर निको पार्न सक्छ?
तथ्य जाँच: अन्तिम चरणको क्यान्सर हर्बल मिश्रण प्रयोग गरेर ३ दिनमा निको पार्न सकिन्छ
Niranjan K Sharma - 21/07/2020 0
सोशल मिडियामा एउटा भाइरल भिडियोमा दाबी गरिएको छ कि अन्तिम चरणको क्यान्सर समेत ७२ घण्टामा निको पार्न सकिन्छ। ओखर, अंकुरित अन्न, मह, लसुन र कागतीले बनेको घरेलु मिश्रण सेवन गरेर उक्त रोग निको पार्न सकिन्छ भन्ने दाबी रहेको छ। भिडियो अनुसार उक्त मिश्रण फ्रिजमा राख्नु आवश्यक छ र दिनमा धेरै पटक खानुपर्दछ। हाम्रो अनुसन्धानमा उक्त मेसेज झुटो रहेको पाइएको छ।
के नरिवल तेल को प्रयोग गरि डेंगू लामखुट्टेको टोकाइ बाट जोगिन सकिन्छ?
Niranjan K Sharma - 17/07/2020 0
एउटा सोशल मिडिया पोष्टमा घुँडा मुनि नरिवलको तेल लगाउँदा लामखुट्टेको टोकाइ बाट जोगिन सकिन्छ र अन्ततः डेंगु बाट जोगिन सकिन्छ भनेर दाबी गरिएको छ। यो मेसेज को श्रेय तिरुपतिको श्री साईसुधा अस्पतालका डा बी सुकुमारलाई दिइएको छ। हाम्रो अनुसन्धानमा उक्त मेसेज झुटो रहेको पाइएको छ।
के मास्कको प्रयोगले फोक्सोमा फंगल संक्रमण निम्त्याउन सक्छ?
Niranjan K Sharma - 14/07/2020 0
एक जना फेसबुक प्रयोगकर्ताले एउटा मेसेज प्रकाशित गरेर दावा गरेका छन् कि मास्कको प्रयोगले मान्छेलाई फोक्सोमा फंगल संक्रमण भइरहेको छ। हामीले त्यस्तो सम्भावना बारे तथ्य जाँच गर्यौ र थाहा पायौ कि फोहोरी मास्कहरू वा फोहोर अवस्थामा राखिएका मास्कहरुको प्रयोगले मात्र फंगल संक्रमण हुन सक्छ। हामीले यो मेसेज प्राय जसो झुटो रहेको पायौ।
तथ्य जाँच: के १० सेकेन्ड देखि १ मिनेट सम्म मैले मेरो श्वास रोकेर कोभिड-१९ को आत्म परीक्षण गर्नसक्छु?
Niranjan K Sharma - 11/07/2020 0
सोशल मिडियामा तपाईंलाई कोभिड-१९ लागेको छ कि भनेर जांच गर्नको लागि एउटा 'सेल्फ टेस्ट' छ भन्ने दाबी गरिएको अनेकौ पोस्टहरू देखा परेका छन्। केही पोष्टहरूमा दावी गरिएको छ कि यदि तपाईले आफ्नो श्वास १० सेकेन्डको लागि रोक्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई कोभिड-१९ लागेको चैन। अन्य केहि पोष्टहरुमा यो समय १ मिनेट हुने दाबी गरिएको छ। हामीले सोधखोज गरेर पत्ता लगायौ कि 'श्वास रोकेर कोभिड जाँच गर्न सकिने’ यी सबै दावीहरू झुटो रहेका छन्।
कोभिड-१९ को घरेलु उपचारको बारेमा टाटा हेल्थको सल्लाह नक्कली र खतरनाक थियो
Niranjan K Sharma - 09/07/2020 0
चलनमा रहेको एउटा व्हाट्सएप मेसेजमा टाटा हेल्थको लिंक सहित कोभिड-१९ को लागि सल्लाहहरुको एउटा शृंखला रहेको छ। मेसेजमा कोभिड-१९ को तीन चरणहरूको बारेमा बताइएको छ र आफैले गर्न सकिने विभिन्न उपचारहरुको सल्लाह दिइएको छ। हामीले सोधखोज गरेर पत्ता लगायौं र उक्त मेसेज झुटो भएको कुरा थाहा पायौ।
“कागती (सिट्रस) क्यान्सर कोषहरूलाई मार्ने एउटा चमत्कारी उत्पादन हो। यो केमोथेरापी भन्दा पनि शक्तिशाली छ। “- प्रत्येक केही महिना पछि अनेकौ स्रोतहरूबाट पुन: उत्पन्न भइरहने यो एक विशेष दावी हो। यो भन्दा पहिला पनि यस्तै दावीहरू ‘मेरील्याण्ड कलेज अफ मेडिसिन’ का कुनै ‘डाक्टर गुप्ता’ लाई श्रेय दिंदै दाबी गरिएको थियो भने यस विशेष पोष्टले ‘इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस’ द्वारा क्यान्सरको ठ्याक्कै त्यस्तै उपचारको दावी गरेको छ। त्यस्तै मिल्दो जुल्दो सन्देशहरू ईमेल, फोरम पोष्टहरू र व्हाट्सएप सन्देशहरू मार्फत विभिन्न समयमा साझा गरिएको छ।
हामीले पत्ता लगाएर थाहा पायौं कि अनुसन्धानहरूमा कागती (सिट्रस जूस) क्यान्सरमा लाभदायक प्रभाव पारेको देखिएको छ यद्यपि कागती को रस को तुलना केमोथेरापी संग गरिएको दाबी अति नै बढाईचढाई गरिएको पाइएको छ। हामी यस दावीलाई अधिकांश झुटो रहेको भनेका छौं।
दाबीको एक अंश तल दिइएको छ:
“कागती (सिट्रस) क्यान्सर कोषहरूलाई मार्ने एउटा चमत्कारी उत्पादन हो। यो केमोथेरापी भन्दा १०००० गुणा बढी शक्तिशाली छ। ” दावीको एउटा स्न्यापशट तल दिइएको छ र यसको संग्रहित संस्करण यहाँ देख्न सकिन्छ।
कुनै अन्य डाक्टर / अनुसन्धान संस्थानलाई श्रेय दिइएको समान प्रकारको एउटा अर्को दावी पनि सामाजिक संजालमा लोकप्रिय छ। त्यस्तै एउटा पोष्टको संग्रहीत संस्करण यहाँ छ।
के ‘इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस’ बाल्टिमोरमा अवस्थित छ? के तिनीहरूले त्यस्तो बयान जारी गरेका छन्?
बाल्टिमोर हेल्थ साइन्स इन्स्टिच्युट भन्ने संस्थान अस्तित्वमा रहेको छ (हामी मान्दैछौं कि सन्देशमा सन्दर्भित गरिएको संस्था यहि थियो किनभने यस क्षेत्रमा त्यस्तै नाम भएको कुनै अन्य संस्था अस्तित्वमा छैन)।
तिनीहरूले यो बयान जारी गरेका छैनन्।
विभिन्न मिडिया हाउसलाई पठाइएको जवाफमा संस्थानले स्पष्ट पारेको छ, “सम्बन्धित ईमेल र जानकारी हेल्थ साइन्स इन्स्टिच्युट बाट जारी गरिएको थिएन। यो स्क्याम ईमेल सुरू गर्ने व्यक्तिले हाम्रा केहि प्रकाशित सामग्री प्रयोग गरेको थियो, यद्यपि ति प्रकाशित सामग्रीमा कागती सँग कुनै सम्बन्ध थिएन तर पनि कागती को बारेमा त्यस व्यक्तिले जानकारी सम्मिलित गरेको थियो। यो सहि छैन र यस कारण हामीलाई ठूलो समस्या बेहोर्नु परेको छ। यद्यपि यसले क्यान्सर पीडित व्यक्तिहरुलाई गलत वा परीक्षण नगरिएको चिकित्सकीय सल्लाह दिएको छ जुन धेरै चिन्ताजनक कुरा हो। सायद सिट्रस फलमा केही एन्टी-क्यान्सर गुणहरू हुन सक्छन् वा हुन सक्दैन (म त्यस बारेमा बोल्न योग्य छैन) तर मलाई निश्चित रुपमा एउटा कुरा थाहा छ कि यस जानकारीको “स्रोत” को रुपमा भनिएको हेल्थ साइन्स इन्स्टिच्युटले यो जानकारी प्रकाशित गरेको छैन। यस ईमेल वा यसमा समावेश गरिएको जानकारी सँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन। ”
के कागती पानी वा तातो कागती पानीले क्यान्सरको उपचार गर्न सक्छ?
दिल्लीका वरिष्ठ आन्कोलोजिस्ट तथा THIP का समीक्षा टोलीको एक सदस्य डाक्टर मनीष सिंघल ले भन्नुहुन्छ “तातो पानी संगै कागती को रस पिउनु राम्रो बानी हो तर यदि कागती पानी मात्र खाएर क्यान्सर निको पार्न सकिन्छ वा केमोथेरापी उपचारको सट्टा यो प्रयोग गर्न सकिन्छ भने क्यान्सर अनुसन्धानमा हामीले यति धेरै खर्च गर्नुपर्दैनथ्यो। ”
यद्यपि विश्वभरि धेरै विश्वसनीय अनुसन्धानहरूमा कागतीको रसमा एन्टी-कार्सिनोजेनिक गुणहरू (क्यान्सर रोकथाम गर्ने तत्त्वहरू) रहेको पाईएको छ।
त्यस्ता एक अनुसन्धानको निष्कर्षमा लेखिएको छ “माथि वर्णन गरिएको प्रयोगात्मक परिणामहरूमा साइट्रस लिमोनोइडले पर्याप्त एन्टीक्यान्सर क्रिया प्रदान गर्ने संकेत दिएको छ। नमुना पशुहरुमा यो यौगिकहरू विषाक्त प्रभावमुक्त देखिएको छ त्यसैले प्राकृतिक सम्भावित फल, लिमोनोइड्स द्वारा सुदृढ साइट्रस वा विशिष्ट लिमोनोइड्सको शुद्ध रूपमा मानवीय क्यान्सर बिरुद्द लिमोनोइड्सको प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ”।
त्यस प्रकारका अनुसन्धानहरू सुन्तलाको रस तथा सिट्रसको औषधीय प्रयोग मा पनि गरिएका छन् र प्रारम्भिक परिणामहरूले केहि सकारात्मक परिणाम देखाएको छ।
यद्यपि प्रायजसो त्यस्ता अनुसन्धानहरू मानव कोषहरूमा अझै निर्णायक रहेका छैनन्। डाक्टर मनीष सिंघलले भने अनुसार, “कागती पानी पिउनु राम्रो बानी हो। यसले तपाईंको शरीरलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्दैन। तर यसले किमोथेरापी उपचार को ठाउँ लिनसक्छ वा क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको पार्न सक्छ भनेर सोच्नु खतरनाक अतिशयोक्ति हो।”
Next articleयुनिस्टो: ४ घण्टामा मृगौलाको पत्थरी निको पार्ने सिरप अस्तित्वमा रहेको छैन
तथ्य जांच - NepaliNiranjan K Sharma - 21/07/2020 0
तथ्य जांच - NepaliNiranjan K Sharma - 17/07/2020 0
तथ्य जांच - NepaliNiranjan K Sharma - 14/07/2020 0
तथ्य जांच - NepaliNiranjan K Sharma - 11/07/2020 0
तथ्य जांच - NepaliNiranjan K Sharma - 09/07/2020 0
तथ्य जांच - NepaliNiranjan K Sharma - 07/07/2020 0
तथ्य जाँच: कोरोनाभाइरसको लागि तातो चिया र बाफ
कोरोनाभाइरस उपचारको बारेमा अर्को दावी सोसल मिडियामा उत्पन्न भएको छ। यस दाबीमा तातो चिया खाने, श्वास द्वारा बाफ लिने र तातो पानीले गार्गल गर्ने जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएका छन्। हामीले तथ्य जाँच गरेर उक्त दाबी झुटो भएको पत्ता लगाएका छौ।
Fact Checker (Hindi) Nishant
Fact Checker (Nepali) Niranjan
Fact Checker (भोजपुरी) Satish